saw htwe၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
saw htwe's Apps
saw htwe's Likes
Saw htwe's ၏မိတ်ဆွေများ
saw htwe's Groups
saw htwe's Discussions
Started this discussion. Last reply by saw htwe Jul 29, 2013. 10 Replies0Likes
စူဠသောတာပန်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒွိဟ ဖြစ်နေတာလေးတွေ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားသော တရားတော်များတွင် သောတာပန်နှင့်ပတ်သက်၍ (၃)မျိုးရှိကြောင်းသိရပါသည်။ (၁) စူဠသောတာပန် (သတ္တခတ္တုံ ပထမသောတာပန်) (၂)…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by saw htwe Jul 11, 2013.2Replies0Likes
သံသရာ၏ အစ နှင့် အဆုံး ဘယ်ဟာက ပိုရှည်သနည်း၊ ဆွေးနွေးပေးကြပါ။ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ဇော်ထက်မောင် Apr 15, 2013. 1 Reply0Likes
လောကသုံးပါး ဘုံသုံးပါးအကြောင်း သိသမျှဆွေးနွေးပေးကြပါ။ ၃၁ ဘုံတွင်ပါဝင်သော လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာ၊ တိရစ္ဆာန် အစရှိသည်တို့သည် လောကသုံးပါးတွင် ဘယ်လောက၌ပါဝင်ပါသနည်း။ သတ္တ၀ါဆိုသည်မှာ အဘယ်အရာကို ခေါ်ပါသနည်း။အဘယ်ကြောင့်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
phyuthi သည်saw htweကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
saw htwe သည်ဘလော့တင်သွားပါသည်။
saw htwe replied to ကိုကျော်သန်း's discussion 'မေးမြန်းဆွေနွေးခြင်း'
"အခုလို ဗဟုသုတရဖွယ် ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် သာဓုခေါ်ပါတယ်။ တကယ်လက်တွေ့အားထုတ်ပြီး တရားအသိထူးများရရှိပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။"
saw htwe replied to ကိုကျော်သန်း's discussion 'ဆွေးနွေးပေးပါရန်'
"ကိုကျော်သန်းမေးခွန်းက နဲနဲတော့ ဖြေရခက်မယ်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မဂ်ကိုရထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာ အတိအကျ ဖြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေဖြင့်လည်း ကိုယ်တိုင်တရားကိုအားထုတ်သော်လည်း သောတာပတ္တိမဂ်ကို မရသေးသောသူသည်လည်း အတိအကျ…"
saw htwe replied to tunlin's discussion 'ဘာသာခြားတစ်ယောက်အနေနှင့်သီလ မယူ သရဏဂုံ မယူဘဲ ၀ိပသနာအားထုတ်ခွင့်ရှိ မရှိ ပါဘုရား'
saw htwe replied to ကိုကျော်သန်း's discussion 'အနှီးစပ်ဆုံး တရာခံ ဆွေးနွေးပေပါရန်'
"၁။ အယူမှား၊ အမှတ်မှားသောကြောင့် ငါ၊သူတစ်ပါး၊ ယောက်ျား၊မိန်းမ ဟုစွဲလန်းသည်။ ဓာတ်လေးပါးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဤခန္ဓာ ကို ငါ့ခန္ဓာဟု စွဲလန်းသည်။ ထို့ကြောင့် ငါ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲ ငါ့ခန္ဓာဟု စွဲလန်းမှုသည် အပါယ်လေးပါးတံခါး မပိတ် နိုင်ရခြင်း၏ အနီးစပ်ဆုံးအမှားဟု…"
"ဖြစ်ပျက်ဆုံးပြီး သဘာဝတရားအပေါ်မှာ တည်နေတာက အရဟတ္တမဂ်ကို ရတဲ့ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ အမြင်ပါ။"
saw htwe သည် AK-47's၏ 'ဘုရားထက်သာသူများ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"တရားအားထုတ်၍ သမာဓိကြောင့် ဝေဒနာချုပ်ပြီး စိတ်ငြိမ်သက်ချမ်းသာမှု ဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်။ ၄င်းကိုပင် ဝေဒနာကုန်ပြီဟု ပြောသည်ထင်၏။"
saw htwe replied to saw htwe's discussion 'စူဠသောတာပန်နှင့်ပတ်သက်၍'
"ဟုတ်ကဲ့ ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
ma nge hlaing replied to saw htwe's discussion 'စူဠသောတာပန်နှင့်ပတ်သက်၍'
"မင်္ဂလာပါရှင်....တရားကိုမြတ်နှိး တန်ဖိုထားလို အမေး အဖြေ လေးတွေ လုပ်ကြတာကို မင်္ဂလာတပါမို ဝမ်သာ ဂုန်ယူပါတယ်..တရားကိုလိုလာကြတဲ့ ကျမတို ဗုဒ္ဓသာတွေမှာ လူလာဖြစ်ခိုက် နှစ်နှစ်ခြိုက်စွားအရေးထားရမှာ ဝိပဿနာအလုပ်ပါဘဲ့...ဘာကြောင့်လဲးဆိုရင် ..အပါယ်ကို…"
saw htwe သည်AK-47's ၏ 'လက်သည်းခွံပေါ်က မြေတစ်မှုန့်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
saw htwe သည်မောင်မြင့်'s ၏ '" ကြီးပွားချမ်းသာလိုပါလျှင် "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
saw htwe သည်AK-47's ၏ 'ကျေးဇူးရှင် ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပတ္တိ အကျဉ်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
saw htwe သည်ကလေးတို.ဆရာမ's ၏ 'မြန်မာနိုင်ငံ ခေတ်အဆက်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သမိုင်းစဉ် (၃)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
"ဟုတ်ကဲ့ အပါယ်တံခါး အပြီးတိုင်ပိတ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
saw htwe's ၏ဓါတ်ပုံများ
Saw htwe's Blog
ဒီဘလော့ကို မေ 8, 2013 တွင်2:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
saw htwe သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
saw htwe ကိုလက်ဆောင်ပေးရန်နေရာ။
7:23pm အချိန်မတ် 16, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:46pm အချိန်မတ် 16, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:20pm အချိန်ဇွန် 15, 2013, တွင် mymother1221@gmail.com မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:02pm အချိန်မတ် 16, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။